MAKUTI, ZIMBABWE —
Madzimai aya, anosanaganisira vechidiki nevakuru, anoti bhizinisi rekutengesa huswa rinorwadza sezvo vachifamba mitunhu yakareba kunotsvaka huswa uhu.
Vanoti kunyange hazvo vachiwana huswa uhu pachena, vanobhadhara mari yekuti hutakurwe kuti huuye pavanotengesera pedyo nemugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu apo hunowonekwa nevanhu vakawanda.
Ambuya Chenai Mazi, avo vave nemakore gumi nemashanu vachitengesa huswa, vanoti huswa hauchabhadhare senguva yakare apo vakatanga. Vanoti vanhu vakawanda vakatenga mombe nekuendesa vana kuzvikoro nemari yekutengesa huswa. Vakapamhidzazve vachiti parizvino vave kufa nenyota makumbo ari mumvura sezvo vaine huswa hwakawanda asi pasina ari kuuya kuzohutenga.
Ambuya Mazi vanoseka vanhu vanoenda kwavari vachida kutenga huswa nechikwereti vachiti havana kumbozviita mukutengesa kwavo kwese.
Umwe wemadzimai aya, Amai Sinodia Mveremu, vanoti mazuva ano huswa hauchabhadhara nokuti hwave kutengwa nemutengo wakaderera sezvo vanhu vasina mari munyika.
Asi mumwe mudzimai wechidiki, Amai Senzeni Mavata avo vakatanga kutengesa huswa makore ano, vanoti ane ganda ane nyama hazvienzane neasina nokudaro vachashingirira kunyange vachiwana mari shoma.
Madzimai anotengesa huswa aya anoti munguva yakare vanhu vaibva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika vachiuya kuzotenga huswa hwekupfirira dzimba dzavo zvikuru sei vagari vemumarukishena epakati nepakati anogara vanowana pamwe nenzvimbo dzekutandarira.
Vanotizve zvinhu zvichiri zvakanaka munyika zvizvarwa zvekuZambia zvaiuya munyika kuzotenga huswa nemari yakawanda sezvo vaitenga vari muzvimapoka.
Kunyange hazvo bhizinisi rekutengesa huswa riri kuramba richioma zuva nezuva madzimai aya anoti havana zvimwe zvekuita zvinovawanisa mari nokudaro vacharamba vakashinga vachitengesa huswa.